3.Working with Ubuntu,All the applications you need | Tho Hi
3.Working with Ubuntu,All the applications you need
23/10/2013 by thohi
13.04 version အတှကျရေးထားပွီး　ဘယျမှာမှ　မတငျထားမိတာ　အခုဒီနရောမှာ　တငျလိုကျပါတယျ။　manual ဘာသာပွနျမယျဆိုပွီး　ယူထားတဲ့　အပိုငျးထဲကပါ။　ဖတျရတာ　အဆငျမပွလြှေငျတော့　ဘာသာပွနျတာ　အားနညျးလို့ပါ။
သငျလိုအပျသော application မြား
အကယျ၍ သင့ျအနဖွေင့ျ Window နှင့ျ Mac မှအသုံးပွုခဲ့သူဖွဈပါက အသုံးပွုခဲ့ဖူးသော program မြားပွနျလညျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။တခြို့ program မြားကို linux version ဖွင့ျပငျသုံးနိုငျပါသညျ။တခွားလိုအပျသော application မြားကိုလညျး အခမဲ့ရနိုငျပါသညျ။ယခု အခနျးတှငျ Ubuntu ၌အဆငျပွသေောအရာမြားဖောျပွပါမညျ။Application အမြားစုကို Software Center မှရယူနိုငျပါသညျ။ Asterisk(*) အမှတျအသားပါ ပါက တိုကျရိုကျ တရားဝငျဆိုကျမြားမှ ကူးယူနိုငျပါသညျ။
-Window မှ Microsoft Office,LibreOffice
-Mac OS မှ iWork,Microsoft Office,LibreOffice
-Linux မှ LibreOffice, KOffice, GNOME Office, Kexi (database application)
Ubuntu ၌ သငျကွိုကျနှဈသကျရာ ရှေးခယြျနိုငျပါသညျ။အသုံးအမြားဆုံးကတော့ LibreOffice ပါ။ ပါဝငျတာတှကေတော့
LibreOffice Suite သညျ တပါတညျး ပါဝငျပါသညျ။ Base ကတော့ တပါတညျး မပါဝငျ၍ ထပျမံထည့ျသှငျးပေးရပါသညျ။
-Windows အတှကျ Microsoft Oulook,Mozilla Thunderbird
-Mac OS အတှကျ Mail.app,Microsoft Outlook,Mozilla Thunderbird
-Linux အတှကျ Mozilla Thunderbird,Evolution, KMail
ရုံးသုံးအတှကျ email ဝနျဆောငျမူမြား မြားစှာရှိပါသညျ။ အမြားဆုံးအသုံးပွုတာကတော့ Mozilla Thunderbird ပါ။ Window တှငျလညျးသုံးနိုငျပါတယျ။ Thunderbird သညျ Ubuntu တှငျ တပါတညျး ပါဝငျသော application တခုပါ။ တခွား တခုအနဖွေင့ျ Evolution ရှိပါတယျ။၎င်းငျးသညျ Microsoft Outlook နှင့ျတူ ၍ calendar လညျးပါဝငျပါတယျ။
-Window အတှကျ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,Chromium, Google Chrome
-Mac OS အတှကျ Safari, Mozilla Firefox, Opera,Chromium, Google Chrome
-Linux အတှကျ Mozilla Firefox, Opera* , Chromium, Google Chrome, Epiphany
အသုံးအမြားဆုံး Browser မြားကို Software Center မှ ကူးယူနိုငျပါသညျ။
-Window တှငျ Adobe Reader
-Mac OS X တှငျ Adobe Reader
-Linux တှငျ Evince, Adobe Reader, Okular
Evince သညျအသုံးပွုရလှယျကူပွီး တပါတညျးပါဝငျပွီး အသုံးပွုရ လှယျကူပါသညျ။ Evince ဖွင့ျမသုံးလိုလြှငျ Ubuntu တှငျ Adobe Reader အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
-Window တှငျ Window Media Player, VLC
-Mac OS X တှငျ Quicktime, VLC
-Linux တှငျ VLC, Totem, Mplayer, Kaffeine
Ubuntu အသုံးပွုသူမြားအနဖွေင့ျ မီဒီယာမြားဖှင့ျနိုငျရနျ ရှေးခယြျစရာမြား မြားစှာရှိပါသညျ။အသုံးမြားသော player နှဈခုမှာ VLC နှင့ျ Mplayer ဖွဈပါသညျ။Totem ကတော့ နဂိုကတညျးကပါဝငျ အသုံးပွုနိုငျသော player တခုပါ။
-Windows တှငျ Window Media Player, iTunes, Winamp
-Mac OS Xတှငျ iTunes
-Linux တှငျ Banshee, Rhythmbox, Amarok, Audacity, Miro
Ubuntu တှငျ အထကျပါ Rhythmbox, Amarok စသညျမြားဖွင့ျတေးဂီတမြားကို နားထောငျနိုငျပါသညျ။Audacity သညျ Winamp နှင့ျဆငျတူပါသညျ။ Miro သညျ ဗီဒီယိုကွည့ျနိုငျပွီး တီဗှီ အစီအစဉျမြားကိုလညျး အငျတာနကျမှ တိုကျရိုကျကွည့ျနိုငျပါသညျ။
CD နှင့ျDVD ကူးခွငျး
-Winndows တှငျ Nero Burning ROM, InfraRecorder
-Mac OS X တှငျ Burn, Toast Titanium
-Linux တှငျ Brasero, K3b, Gnome-baker
အထကျပါ Linux တှငျအသုံးပွုသော burner မြားမှာ သုံးရလှယျကူ၍ မြားစှာသောစှမျးဆောငျနိုငျမှုမြား ရရှိနိုငျပါသညျ။၎င်းငျးတို့သညျ open source နှင့ျ အခမဲ့လှပျလပျစှာ သုံးနိုငျပါသညျ။
-Windows တှငျ Microsoft Office Picture Manager, Picasa
-Mac OS Xတှငျ Aperture, Picasa
-Linux တှငျ Shotwell, gThumb, Gwenview, F-Spot
ဓာတျပုံမြားကို Ubuntu တှငျတပါတညျးပါသော Shotwell ဖွင့ျ ကွည့ျရှု့တညျးဖွတျနိုငျပါသညျ။အထကျပါဖောျပွခဲ့သော တခွား အရာမြားနှင့ျလညျးကွည့ျနိုငျပါသညျ။
-Windows တှငျ Adobe Photoshop,GIMP
-Mac OS တှငျ Adobe Photoshop,GIMP
-Linux တှငျ GIMP,Inkscape
GIMP သညျ အလှနျကောငျးမှနျသော ရုပျပုံတညျးဖွတျမှု application တခုဖွဈသညျ။ ကိုယျတိုငျ ရုပျပုံမြားရေးဆှဲခွငျးနှင့ျ ဓာတျပုံမြားပါတညျးဖွတျနိုငျပါသညျ။ GIMP သညျ Photoshop လိုပငျစှမျးဆောငျနိုငျ၍ ဓာတျပုံနှင့ျ ဒီဇိုငျး ဆှဲသူမြားအတှကျ အသုံးဝငျပါသညျ။GIMP သညျ တပါတညျး Ubuntu တှငျ မပါသောျလညျး software center မှကူးယူနိုငျပါသညျ။
-Windows တှငျ Windows Live messenger, AIM, Yahoo! Messenger, Google Talk
-Mac OS တှငျ Windows Live Messenger, AIM, Yahoo! Messenger, Adium, iChat
-Linux တှငျ Pidgin, Empathy, Kopete, aMSN
တခွား OS မြားတှငျသုံးသော IM မြားသညျ Linux အတှကျမထုတျထားပါ။သို့သောျ အထကျပါ pidgin စသော IM မြားဖွင့ျ AIM, MSN, Gtalk, Facebook, Yahoo!, ICQ စသညျတို့ကို တပွိုငျထဲ pidgin တခုဖွင့ျ သုံးနိုငျပါသညျ။ အားနညျးခကြျအနဖွေင့ျ တခြို့ video chat မြားကိုမရရှိပါ။ MSN သုံးသူမြားအနဖွေင့ျ aMSN ဖွင့ျအစားထိုးသုံးနိုငျပါသညျ။
-Windows တှငျ Skype, Google Video Chat
-Mac Os တှငျ Skype, Google Video Chat
-Linux တှငျ Ekiga, Skype, Google Video Chat
VoIP သညျ အငျတာနကျပေါျမှ လူမြားဆကျသှယျပွောဆိုနိုငျသောနညျးပညာဖွဈပါသညျ။ Skype သညျ Linux တှငျအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ Ekiga သညျလညျး အသံဆကျသှယျမှုဆိုငျရာတို့ကို SIP စနဈဖွင့ျ အသုံးပွုသော open source တခုဖွဈပါသညျ။Ekiga သညျ Skype ဖွင့ျအဆငျမပွပေါ။
-Windows တှငျ uTorrent, Vuze
-Mac OS တှငျ Transmission, Vuze
-Linux တှငျ Transmission, Deluge, KTorrent,Flush,Vuze,BitStorm Lite
Ubuntu အတှကျ Bittorrent သုံးနိုငျမှုမြားတှငျ Transmission သညျ တပါတညျးပါပွီးဖွဈပါသညျ။ရိုးရှငျး၍ပေါ့ပါးစှာသုံးနိုငျပါသညျ။ Deluge,Vuze, KTorrent တို့သညျလညျး အသုံးပွုသူမြား စိတျကွနေပျစမေည့ျ အထောကျအပံ့မြားလညျးရှိပါသညျ။
← vim Lesson 5.1 ,5.2 , 5.3 , 5.4 , summary
web app crush with unity in 13.04 →